Published June 12, 2020 at 10:09 PM CDT
Kanaafu, guyyaa har’a du’a nama umrii jiddu galeesa dabalate namni covid-19 county keessatti du’ee 39 gaheera. Dabalataan namni qabame 13 yoo ta’u walii galatti nama 3,000 gaheera.
Parkiidhanii fi bakkeen bohaarti Sioux City keessatti argamu gariin baname jira. Kunis bakka I joolen itti taphaatan fi kubbaa harkka kan Jum’aa dhuftu ummataaf banamu dabalateeti. Bakka barumsa daaki, bakka daaki lap fi bakki dendeeti qaama June 22nd banamu. bakka daakii amoo ajajtooni magaala July keessa akka banamu ammas mariira jiru.
Governor Iowa Kim Reynolds historic legislation irratti malatoo seera magaala Des Moines malatteesaniru. Seeri haarawni gaafidhan hiriira nagaha irratti gaafatame, mirga dhibaa qurachaa kan deebisu turee. Kunis kan ufkeesa qabatu nama hudhani qabuu fi akka poolisooni bakka dalagaati rakkina uf hin galchine
Magaala muraasa keessatti lollii kan uumu namni basaa keessatti waal guranii deemu jedhan uduudhan kijiba. Yeroo kaluu kanati Iowa dabalate social media irratti babal’ate jira. Organization mediadhan nama haasawe baay’eera gahe jiiru.
Waan uumameef raagaan qabatame jiraachu baatus, bakka suuqi Iowa muraasa keessatti mukkan dhahatanii akka maxxanfamu godhamera.
Facebookini balleesa kan nama ufiirra fudhatee irraa cufane, garuu hosoynii kijibaale ittifuffuu jira.
Fillanno addattif jimata kana bakka filannii 7 akka banamu July 7 irra commissioner Woodbury county himan. Sababa covid-19 filannoo qara April 14 dheerate jira.
Ajajatooni Plymouth county Fair LeMars keessattis qophiin akka cuffamu filattan. Haalli seera hunda bulchuudhaf fi nageenya nama hunda guutu dhaaf jedhe hojjattoota 24 qofaa kan dalaysiisuf akka itti ulfaata facebook irratti himan.
Local News LocalIowaNebraskaSouth DakotaDes MoinesIowa Governor Kim ReynoldsnewsCOVID-19Oromo